Ogaden News Agency (ONA) – IRAQ: Dagaalkii ugu horeeyey oo ka dhex qarxay Ciidamada Dowlada iyo Kurdida.
IRAQ: Dagaalkii ugu horeeyey oo ka dhex qarxay Ciidamada Dowlada iyo Kurdida.
Waxaa shalay oo Isniin ahayd dagaal culus uu ka qarxay magaalada Kirkuk ee waqooyiga dalkaasi Ciraaq, halkaasi oo ay maalmihii lasoo dhaafay isku horfadhiyeen ciidamada ismaamulka Kurdida iyo ciidamada Dowlada dhexe ee Baqdaad.
Dagaalka ayaa bilowday saaka arooryadii hore kadib markii ciidamada dowlada dhexe oo maalmihii lasoo dhaafay soo buuxiyey nawaaxiga magaalada Kirkuk iyo gobalkaasi Kurdida ku badan tahay ay bilaabeen inay la wareegaan qeybo kamid ah Xarumaha Batroolka laga soo saaro ee gobalkaasi.
Taliska Militariga Ciraaq ayaa xaqiijiyey in ciidamadooda ay doonayaan inay la wareegaan gacan ku heynta Kirkuk gaar ahaan Garoonka Diyaaradaha ee loo yaqaan K1 iyo dhamaan xarumaha laga soo saaro batroolka oo ay horey gacanta ugu hayeen xoogaga Kurdida ee loo yaqaan Bashmerga.
Afhayeen u hadlay ciidamada ismaamulka Kurdida ayaa sheegay in ciidamada Baqdaad laga soo amray ay xasuuq ka geysteen koonfurta magaalada Kirkuk gaar ahaan deegaanada Tos Khormato iyo Daquq, waxayna sheegeen Kurdida in ciidamada dowlada dhexe ay gubeen guryo ay ku jireen dad rayid ah iyagoo adeegsanaya hubkii cuslaa ee Maraykanka siiyey dowlada Ciraaq.
Kurdida ayaa sheeganaya inay weli gacanta ku hayaan Airporka magaalada iyo xarumaha Batroolka laga soo saaro iyagoo sheegay inay dhulkooda difaacan doonaan intuu hal qof ka nool yahay.
Gobalka Kirkuk ayey sanadkii 2014 isaga baxeen ciidamada Dowlada dhexe kadib markii ay halkaasi soogaleen xoogaga Daacish, balse waxaa halkaasi kooxa ISIS ka saaray ciidamada Bashmerga ee Kurdida oo sanadihii lasoo dhaafay halkaasi maamulayey. Dowlada dhexe ayaa sheegtay inay dhulkaasi dib ulla wareegi doonto kadib aftidii dhowr todobaad kahor ay Kurdida u codeeyeen gooni u goosad.